Xaalada Suuqa Bakaaraha ayaa ah maanta Mid Degan | maakhir.com
Xaalada Suuqa Bakaaraha ayaa ah maanta Mid Degan
March 4, 2008 in Somalia
Muqdisho:- Xaaladaha Suuqa Bakaaraha ayaa maanta Degan ka gadaal mod sadex Casho ah oo ay halkaasi ka ognaayeen Qalalaase xoogan, oo lagu eedeeyay inay wadeen Ciidamada Dawlada Federaalka Somalua,Suuqa Bakaaraha ayaa waxa soo food saartay biliqo baahsan oo lagula kacay Suuqaasi.
Ganacsatada suuqa ayaa maanta dib ugu soo laabtay, iyagoo qaar dib u sameysanayay goobahoodii ganacsiga ee ku burburay dagaalka, qaarna ay halkaasi hantidooda kala baxayeen, iyagoo ka cabsi qaba in mar kale uu ay bililiqo ka dhacdo.
Ciidamada dowladda KMG ee Somalia, ayaa waxa ay ku sugan yihiin waddooyinka waaweyn ee suuqa Bakaaraha dhinacyada ka mara, sida Jidka Soddonka iyo Jidka Wadnaha, iyaga oo halkaasi ka wada baadhitaano xoogan iyo waliba Ilaalo ay ka hayaan Goobahaasi.
Suuqa Bakaaraha ayaa waxa in dhawaalaba ka taagnaa xiisad u dhexeysa ciidamada dowladda, ganacsatada iyo qolyaha ka soo horjeeda dowladda, oo xukuumaddu ay ku eedeeyso in suuqa uu saldhig u yahay.
Xukuumada Federaalka Somaliya ayaa iyaga sheegtay inay talaabo cad ka qaadayaan Ciidamada bilaabay inay biliqaystaan Hantida taala Suuqa Bakaaraha waxayna sheegtay dawladu inay qofkii arinkaasi lagu helo la taagayo Maxkamada.
« Condoleezza Rice oo booqasho rasmi ah ugu boqooshay Bariga Dhexe
Idaacada Shabelle ayaa dib loogu soo celiyay qalabkeedii ay dhawaan ka qaadeen Ciidamada DFS »